Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii Heritage ee Djibouti Kasocday oo Lasoo Geba Gabeeyey.
Shirkii Heritage ee Djibouti Kasocday oo Lasoo Geba Gabeeyey.
Posted by Dayr	/ December 18, 2018
Magaalada Djibouti waxaa shalay lagu soo geba gabeeyey Madasha Aragti-wadaagga Soomaalida, oo uu soo qaban-qaabiyay machadka daraasaadka siyaasadda ee Heritage.
Madashan ayaa waxaa ka soo qeybgaley Soomaali ka badan 150 qof oo isugu jira, aqoonyahano, suxufiyiin iyo siyaasiyiin ka kala yimid dhammaan daafaha dunida. Kulanka ayaa waxaa looga hadlayey danaha ka dhaxeeya dadka Af-Soomaaliga ku hadla ee Geeska Afrika iyo horumarintooda.
Saddexdii maalmood ee uu shirka socday, ayaa dhowr guddi oo kala duwan waxa ay falanqeeyeeen arrimo ay ka mid yihiin iskaashiga gobolka Geeska Afrika, is-dhexgalka Soomaalida iyo waxa wada-qabsigooda, arrimaha dhaqaalaha, iyo ammaanka gobolka sidii loo sugi lahaa.
Guddi kasta oo ka koobnaa afar qof, ayaa marka ay soo gudbiyaan warbixintooda kadib, waxaa su’aalo weydiinayey dad gaaraya 150 qof oo shirka joogay.
Wafti balaadhan oo ka socday Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenya (JWXO) oo uu hogaaminayo Halgame Cabdikariim Sheekh Muuse (Qalbi-Dhagax) ayaa madashan ka qaybgalay. Halgame Qalbi-Dhagax ayaa khudbad aad u qiimo badan oo meelo badan taabanaysa ka jeediyay madasha.